MYANMAR MILITARY ANIMALS? | MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA
MYANMAR MILITARY ANIMALS?	September 25, 2009
Filed under: MY WRITINGS,PHOTOS,SATIRE — Nyo Gyi @ 7:02 pm
ဗမာနိုင်ငံမှာ စစ်အဆိုးရက အသစ်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ ၅၀၀၀ ကျပ်တန်ပုံစံနဲ့ နယ်စည်းမခြား လွတ်လပ်တဲ့ အင်တာနက်နိုင်ငံမှာ တစ်စုံတစ်ယောက်က ဟိုးအရင်ကတည်းက ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ၅၀၀၀ ကျပ်တန်ကို အထက်ပါအတိုင်း ယှဉ်တွဲဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဒီ စစ်အဆိုးရဟာ အတော် တိရိစ္ဆာန်စိတ်ဝင်နေပုံရပါတယ်။ သူတို့ ထုတ်တဲ့ ငွေစက္ကူတွေဆိုရင် တိရိစ္ဆာန်ပုံတွေနဲ့ ချည်းပဲ ။ ခြင်္သေ့ပုံနဲ့ ထုတ်လားထုတ်ရဲ့၊ ဆင်ပုံနဲ့ ထုတ်လားထုတ်ရဲ့။
အခြားနိုင်ငံတော်တော်များများမှာ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းများ(ဥပမာ- လွတ်လပ်ရေးဖခင်၊ တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်၊ နိုင်ငံအကျိုးပြုခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဦး အစသဖြင့်)ကို ဂုဏ်ပြုပြီး ငွေစက္ကူများမှာ ထည့်သွင်းဂုဏ်ပြုလေ့ရှိကြတာပါ။ ဗမာပြည်က စစ်အဆိုးရကတော့ ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ အရင်အစိုးရတွေက
ဗမာကျပ်ငွေတွေမှာ ဂုဏ်ပြုအသုံးပြုခဲ့တဲ့ ဆရာစံတို့၊ သခင်ဖိုးလှကြီးတို့၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ ဓာတ်ပုံတွေကို ဖြုတ်ပယ်ထားလိုက်ပြီး သူတို့ကတော့ ခြသေ့င်္ပုံ၊ ဆင်ပုံတွေနဲ့ ငွေစက္ကူများကို ထုတ်လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ တိရိစ္ဆာန်စိတ်ဝင်ပြီး တိရိစ္ဆာန်ကျင့် ကျင့်နေလို့သာ ယခုလို ကိုယ့်တိရစ္ဆာန်အမျိုးအဆွေတွေကို ဂုဏ်ပြုပြီး တိရိစ္ဆာန်ပုံများနဲ့ ငွေစက္ကူများကို ထုတ်လုပ်နေပုံရပါတယ်။ အဟိတ်စစ်အဆိုးရလို့ပဲ ခေါ်ရတော့မလား မသိတော့ပါဘူး။
(ကိုသန်းရွှေကလည်း ကျောက်ဆည်နယ်သားဆိုတော့ ဆင်စိတ်ဝင်နေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်လည်း သူ့ကြည့်ရတာ အိပဲ့အိပဲ့နဲ့ ။)
ပြီးတော့ ဒီ အဟိတ်စစ်အဆိုးရလက်ထက်ကျမှ ငွေစက္ကူတွေကို ဂဏန်းတိုးတိုးပြီး ထုတ်လာလိုက်တာ အခုဆို ၅၀၀၀ ကျပ်တန်ဆိုပြီးတော့တောင် ဖြစ်လာပါတယ်။ အင်း … ဒီ အဟိတ်တိရိစ္ဆာန်စစ်အဆိုးရသာ ဆက်ရှိနေရင် နောက်များဆို ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံမှာလို သောင်းတန်၊ သိန်းတန် ငွေစက္ကူတွေ ဘာတွေတောင်
(27 September 009)
နယ်စည်းမခြား လွတ်လပ်တဲ့ အင်တာနက်နိုင်ငံမှာပဲ ထပ်မံတွေ့ရှိရတဲ့
၁၀၀၀၀ ကျပ်တန်ငွေစက္ကူကို ပူးတွဲဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
တိရိစ္ဆာန်အကျင့်ကျင့်ပြီး တိရိစ္ဆာန်စိတ်ဝင်နေတဲ့ အဟိတ်တိရိစ္ဆာန်စစ်အဆိုးရက ထုတ်ဝေဦးမှာဖြစ်တဲ့
၁၀၀၀၀ ကျပ်တန်ဆိုတော့လည်း မျောက်ဝံပုံလေးနဲ့ပေါ့ဗျာ။
ခြင်္သေ့ > ဆင် > မျောက် > ခွေး > ကြွက် > နွား > ကျား > ကြောင် > ၀က် > ဆိတ် > မြင်း အစရှိသဖြင့်
နောက်ထပ်ထုတ်ဝေမယ့် ငွေစက္ကူများအတွက် တိရိစ္ဆာန်များကို လျာထားလျက်ရှိကြောင်းလည်း အထူးသတင်းရရှိပါသေးတယ်။
၁၀၀၀၀ ငွေစက္ကူပုံဒီဇိုင်းကို အောက်ပါ အင်တာနက်လိပ်စာက ကူးယူဖော်ပြတာပါ။